Ny asa sy fiahiana sosialy novelabelarina tao Maroantsetra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tahaka ny distrika rehetra dia manana zo hahalala ny momba ny asa sy ny fiahiana sosialy ny olona rehetra ao amin’ny distrikan’I Maroantsetra. Izany no nahatonga ny mpiandraikitra nifidy ity distrika ity tamin’ity tapaky ny volana sepitambra ity hitondrana fampiofanana ho an’ny mpiasa sy ny mpampiasa. Nalefa ny fanasana ka 80 mianadahy ireo mpandray anjara izay nahitana solontenan’ny mpiasa sy mpampiasa avy amin’ny ireo sampandraharaha maro samihafa miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana.
Nampahafantarina ireo mpandray anjara nandritra ity fiofanana ity ireo fehezan-dalana momba ny asa na ny code travail izay mifandray amin’ny code de prévoyance sociale mifehy ny Cnaps. Nohazavaina tao koa ny atao hoe fiahiana sosialy sy ny momba izany. Nampahafantarina ny fomba fiasan’ny Cnaps ary ireo tombontsoa amin’ny fidirana mpikambana. Nampahafantarina ireo mpandray anjara ihany koa ireo dingana tokony ataon’ny mpampiasa rehefa mandray mpiasa izy, ny fandrotsahana ireo latsakemboka. Misy ny fanazavana mahakasika ireo fanampiana ho an’ny mpiasa sy vady aman-janany.
Marihina moa fa ny Cnaps dia sehatra telo no tantanany, dia ny fanampiana ny fianakaviana, ny loza sy ny aretina azo avy amin’ny asa sy ny fisotron-dronono, ka nampahafantarina ireo mpiofana ireo taratasy karakaraina amin’izany, ireo fepetra takiana, sy ny fomba handoavan’ny Cnaps ny vola raha tonga ny fotoana handehanana misotro ronono, nohazavaina tamin’ireo mpizaika ihany koa iza ny olona manana zo handray izany raha sanatria ka efa tsy eo na maty ilay olona. Ankoatr’izay dia nampianarina ireo mpiofana ihany koa ny fomba famenoana an’ireo atontan-taratasy ilaina amin’izany mba hialana amin’ny fivezivezena sy fahatarana noho ny tsy fahafenoan’ny taratasy ilaina.
Ny tanjon’ny fampiofanana dia ny fampahafantarana ny zo amin’ny fiahiana ara-tsosialy hananan’ny mpiasa miasa amin’ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiasa ECD amin’ny fanjakana ny zony. Ny fananana fiahiana ara-tsosialy dia manampy ny mpiasa hanana filaminan-tsaina sy fifantohana dieny mbola amperin’asa izy ary mahatsara ny vokatra azo izany fifantohan-tsaina izany.
Nambaran’i Tsimanosy Joseph Sébastien, solontenan’ny mpiofana sady mpampiasa, fa zava-dehibe ity fiofanana ity amin’ny maha mpampiasa azy satria hita sy tsapa hoy izy fa maro ireo zavatra mety mampifanolana ny mpampiasa sy ny mpiasa. Taorian’ny fanazavana teto no hoy izy nahitana ny lesoka nitondrana ny mpiasa nandritra ny taona vitsivitsy. Nilaza izy fa hitondra aim-baovao ho an’ny orinasa tantanany ny fahalalana norantoviny teto. Maro ireo mpampiasa nieritreritra fa vesatra ho azy ny fandoavana ny latsakemboky ny mpiasa saingy taorian’ity fiofanana ity dia nahatsapa izy ireo fa samy manana tombontsoa na ireo mpiasa na ireo mpampiasa.
Samy nahazo ny anjara tandrify azy avokoa na ireo mpiasa na ireo mpampiasa nandritra izay hateloana niatrehana ity fiofanana ity, ary nisy ny fizarana Certificat taorian’ny famaranana ny fiofanana.